Fikarohana an' i Arnaud : niakatra 20 ny olona naiditra am-ponja any Toamasina | NewsMada
Tsy mbola hita i Arnaud, tsy nahazoam-baovao ny sefom-pokontany. Ny olona any am-ponja no efa tafakatra 20, saingy tsy nisy vokany amin’ny fikarohana izany.
Misoko miadana ary miakatra hatrany ny olona aiditra am-ponja vonjimaika momba ny fikarohana an’ i Arnaud, ilay ankizilahy nalaina an-keriny ny 23 novambra lasa teo ka mbola tsy hita popoka hatramin’ izao. Efa novonoin’ny mpaka an-keriny kosa ny anabaviny Annie. Mbola baraingo kosa ny hoe aiza i Arnaud, mbola velona ve sa efa novonoina indray, vonona hifampiresaka sy hifampiraharaha ny ray aman-dreniny.
Ny 25 desambra teo, vosambotra tao Tanandava Randrianjaka Marcellin, mpandraharaha ary anisan’ny mpikirakira fanondranana andramena tao Antalaha. Ity farany izay heverina ho nanatontosa ny famonoana an’ i Annie ary nilaza anaran’ olona roa ka voasambotra ny 26 desambra ireto farany: i Evariste, miaramila teo aloha, sy olona iray tsy mazava ny momba azy. Vokany, herinandro aty aoriana, natalotra ny “cellule d’ enquête” izy telo ireto ny asabotsy teo ary samy naiditra am-ponja vonjimaika ao Ambalatavoahangy avokoa.
Hatreto, mahatatra 20 mianadahy ireo voarohirohy amin’ ity raharaha fakana an-keriny ity ka naiditra amponja vonjimaika raha efa nahatratra ny 70 olona kosa ny nalaina am-bavany.
Tsy vitsy ireo fianakavian’ny olona voarohirohy amin’ ity raharaha ity mimenomenona amin’ny faharetan’ny fihazomana ny havan’ izy ireo izay maharitra hatramin’ny herinandro ao amin’ny borigadin’ny zandarimariam-pirenena misahana ny ady heloka bevava sy fikarohana. Tokony hafainganina ny raharaha. Ireo sefom-pokontany tsy mbola nahazoan’ny mpitandro filaminana vaovao.